KAMUVA, NGIBIZWA NGOHLANYA KANINGANA
Date:28 May 2018 Author: Lindsey Schutters Tags:Empowerment Issue, From the Editor, isiZulu, Microsoft SA
KAMUVA, NGIBIZWA NGOHLANYA KANINGANA. Umuntu osanda kungibiza kanjalo emphakathini yile ndoda ekuleli khasi, uZoaib Hoosen, uMphathi Omkhulu wakwaMicrosoft South Africa. Ukukhuluma iqiniso, angikholwa ukuthi kunomhleli wamabhuku owake wamcela ukuba aguqe ngamadolo adlale ngamathoyizi akhe. Kodwa lokho kulindelekile uma wehlisela inkampani enkulu kunazo zonke emhlabeni ezingeni lomthengi nje ongunomubani.
Kuyakhuthaza ukubona ukuthi zisakhona izinkampani zobuchwepheshe ezizama ukunikeza amathuba abantukazana ukuba benze izinto ezinhle ezibabazekayo. Futhi okuningi kwalokhu kuyenzeka emathuluzini osunawo vele. Impela sesifike enkathini yohlobo lwesine olukhulu kwezezimboni.
Kuyisibhinqo-ke kodwa ukubona ukuthi ukudlanga kokukhula kwethu kwezobuchwepheshe kuzoba isiphetho sethu. Lokhu kuphehlwa okungapheli kwamathuluzi asetshenziswa ngamakhasimende sekudala udoti wezinto ezisebenza ngokuhamba kukagesi ezintanjeni ngendlela eyisivinini esingakaze sibonakale. Ngo-2017, i-United Nations Universty kanye ne-International Solid Waste Assosiation yaveza ukunyuka kodoti ngamaphesenti ayisishiyagalombili phakathi kuka-2014 no-2016 (Global E-waste Monitor 2017). Njengoba kuqagelwa ukunyuka kwalokhu ngamaphesenti angu-17 ngo-2021 – okusho isilinganiso samamametric tonnes asiyizigidi ezingu-52,2 – kulula ukukubiza ngesikhathi sokuphela komhlaba lokhu ngenxa yokubulawa yithuluzi lobuchwepheshe. Lokho akufaki ngisho nakancane izindlela zokugunjwa ezisetshenziselwa ukugumba ilithiyamu, ikhobhalthi negolide ezimayini, okudala umonakalo ezintweni.
Kungathatha isibindi-ke nokho, ngemva kwakho konke lokhu kushunyayezwa, ukwethula amakhasi angekho ngaphansi kwangu-10 mayelana namagajethi acwebezelayo, amasha. Mina-ke, ngakwenza lokho. Kodwa ngizweni kahle: izindawo zokusebenza ziyashintsha kanti nengcindezi kubasebenzi mayelana nokulindeleke kubo iyaqhubeka nokwanda. Uzodinga amathuluzi amasha, afana nalawa okukhulunywa ngawo ekhasini 31.
Bese kuthi kulawo mathuluzi amasha axhunyiwe, uzosebenzisa idatha ngendlela eyisivinini esedlula udoti ozowulaxaza kwipulanethi (enkanyezini ezungeze ilanga). Idatha iwuhlobo lwemali lwesikhathi samanje emsebenzini kanti kufuneka siqeqeshe umhlaziyi omusha ozosisiza ukuba sikuqonde lokhu. I-BCX iyakwazi lokhu futhi ifake izigidi kukho ukuzisiza ukuba ibe sendaweni ekahle uma kufika idumela elilandelayo kwezemfundo. Ngikhulume nososayensi bakusasa bedatha abaqavile abafundela lokhu e-Explore Data Science Academy, ukwazi kabanzi ngohlobo lomsebenzi olangazelelwa kakhulu njengamanje. Lolu hlelo lukhokhelwa ngabakwa-BCX. Ngakho-ke, ngokohlelo lwenkampani elaziwa ngokuthi yiLearn Initiative, olusemkhakhasweni wokuhumusha yonke imininingwane yaseKhan Academy iyihumushele ezilimini ezisemthethweni zaseNingizimu Afrika ezingesona isiNgisi,
sithathe ikhasi elilodwa encwadini yaso lesi sikhungo (ngokusizwa abangani bethu bakwaMicrosoft) sahumusha yonke imininingwane elusizo kuleli bhuku sayiyisa kwisiXhosa nakwisiZulu ukuze iningi labantu baseNingizimu Afrika nabo bahlomule kule nguqukombuso. Iya ku-popularmechanics.co.za ukuze ufunde ngalokhu.
Izwe lethu liyaguquka kanti uguquko kwesinye isikhathi luzwakala sengathi luyisiphetho. Uma kunjalo, mina ngingamane ngizame ukuba ngibe nomthelela omuhle empilweni yomuntu othize ukuze sonke sizohamba sijabule.